Feedereeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa dhimmamtoota waliin mari’ate – Fana Broadcasting Corporate
Feedereeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa dhimmamtoota waliin mari’ate
Finfinnee, Onkololeessa 25,2012(FBC) – Feedereeshiniin kubbaa milaa Oromiyaa dursitoota garee, murteessitootaa, leenjistootaa fi dhimmamtoota waliin mari’ate.
Hanqinootaa fi ciminoota raawwii hojii bara 2011 qorachuun kallattii hojii bara 2012 irratti mari’atamuu isaa Itti Gaafatamaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa obbo Firoomsaa Laggasaan himaniiru.
Gareewwan liigii kubbaa miilaa Oromiyaa keessatti hirmaatan ispoorteessitoota ciccimoo akka horataniif ni hojjetama jedhan obbo Firoomsaan.
Liigiin kubbaa miilaa Oromiyaa bara kana iddoo torbatti kilaastaraan qoodamuun ni gaggeeffama kan jedhan obbo Firoomsaan, guyyaa har’aa carraa kaafatanii dorgommiif of qopheessuu eegalu jedhaniiru.
Akka Biiroon dhimmoota koominikeeshiinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa gabaasetti dambii haaraan qophaa’e hojiirra kan oolu yoo ta’u hojiirra olmaa isaatiif dhimmamtoonni hundi gaheesaanii bahuu akka qaban Obbo Firoomsaan gaafatanniru.
Rakkoo nageenyaa fi namuusa dirree ispoortii irratti muul’atu maskuuf qaama dhimmi ilaalu waliin xiyyeeffannoon akka hojjetamu ibsameera.
Kilaboonni hundinuu guddatoota irratti bifa addaan hojjechuu akka qabanii fi ispoorteessitoota ciccimoo fi hedduminaan horachuuf manneen barnootaa irratti hojjetamuu akka qabu obbo Firoomsaan himaniiru.
Atleet Leellisaa Deessisaan, badhaasa maaraatoonii 2019 injifate
Arseen Weengar kilabii Jarman Baayarn Muuniik leenjsuun isaa hin oolu jedhame
Atleet Daraartuu Tulluu koree hojii raawwachiiftuu Olompikiitti deebite